FSX ma gị
FSX ma gị 3 afọ 5 ọnwa gara aga #66
Kedu ụzọ ka mma isi mata ibe anyị karịa ịkọwa ihe anyị na-eme FSX, nri?
Naanị 2 iwu. dịghị arụ ụka (ma ọ bụrụ na e nwere ihe a nsogbu buru ya ebe ọzọ, biko); ma ọ dighi-eme ihe ọchị ndị ọzọ
Njikọ na ugbo elu na Rikoooo saịtị na-abụghị nanị ume, m nabata ha!
M n'anya na-apụ iche iche ugbo elu! Nwere ebe ọ bụ na m bụ nwa ewu.
Maka onwe m ....... Abụ m onye isi nke American Airways VA. M na-eme ihe ka ukwuu n'oge m FSX na-ebu ibu dị ogologo dị ka nke ahụ bụ ihe na - eme ka ndị ụgbọ elu ego kacha nwee ego. Nnụnụ abụọ kachasị elu nke m fere bụ 2-747F na 800LCF. Anyị nwere ọdụ ụgbọ mmiri buru ibu n'agbanyeghị nha dịgasị iche iche.
Nta m na-eche bụ Dash 8-100 na Embraer Hapụrụ 600.
Kachasinu m na-eche ga-abụ ndị 747s, na 707-320, na 777-200LR.
Kasị Ochie ga-Boeing 314 na 707-320
Kasị ga-Concorde, na-enweghị ajụjụ. (Ka isughari ihe e dere "Charlie" m, m "-agaghị na-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na [m] ga-Mach-2 na [My] ntutu na ọkụ" akpa ọchị)
Slowest bụ, n'enweghị ajụjụ ndị V-22, na Kra-47, nke anyị na-eji naanị n'ihi na-efe efe mmanụ rig ọrụ si rig (agwụ n'ezie, ma ngwa ngwa ma ọ bụrụ na iji osprey heh)
My onye mmasị? Nke ahụ bụ a siri ike onye. M ga-asị na 707-320 na C-130.
Olee mgbe m ofufe? Ọfọn, na-eme ihe n'eziokwu .... fọrọ nke nta na-abụghị nkwụsị. N'ihi ya, anya n'ọnwa a, m na-na na ite 461.39 aka elekere, na 206,931
Mgbe bụghị na-efe efe maka Airline, m ga na-emekarị na-na-efe efe na Tomcat.
Ụfọdụ njikọ ụfọdụ nke Rikoooo nnụnụ m na-eji
B747-xxx Mega ngwugwu (m na-eji LCF a - ezie na m nwere nile 747 megapacks arụnyere akpa ọchị)
Ma ọ bụrụ na ị chọrọ naanị ndị LCF ...
B737-700 American ụgbọ (adịghị ugbu a anyị nsoro ma m nwere ya na hụrụ ya n'anya)
B777-200 (mgbe m na-adịghị eji ihe ọ bụla nke ndị a na mkpọ .... m KA ukwuu nwere ike ikwu ya!)
B707-42 (m na-eji Captain Sim version, ma ga-na-agbalị a si n'izu a! Nọrọ na-ekiri IHE A Review!)
FSX ma gị 3 afọ 5 ọnwa gara aga #69
Ọ ga-amasị m ịjụ ntakịrị ihe. Nke mbu bu njehie n’egosiputa mgbe m jisiri ike igbunye ebe a na-egwu Sim Giants Gran Canaria. Nmehie ahụ bụ mpaghara Mpaghara (ya na ụfọdụ ọnụọgụ) ahụghị. Fim ahụ mara mma anaghị arụ ọrụ ma ọlị FSX sp2. Wepụrụ ya mana njehie ahụ ka dị.
Nke abụọ. Ọ kwere omume jikota VC si A320 Family multi-livery mkpọ, na Thomas Ruth A330 / 340 na otú? Ma ibudatara ebe a.
Ndumodu ikpe azu: site Dariussssss.
FSX ma gị 3 afọ 5 ọnwa gara aga #72
Daalụ Gh0stRider203 gị biputere, anyị maara na ị na a bit ọzọ ugbu a, na-anabatanụ dị ka a onye njikwa oge na forum.
Dariusssss: Iji wepu njehie ị ga-ewepu ọhụhụ ọbá akwụkwọ ọhụma gị FSX hazie Aga m elele ime mara mma iji lelee ma njehie dị na onye nrụnye. ọ na - eme na Grand Canary ma ọ bụ mpaghara ndị ọzọ?
maka gị abụọ ajụjụ, ee m na-eche na ị nwere ike jikota VC si A320 Family multi-livery mkpọ, na Thomas Ruth A330 / 340. Iji mee ka a VC jikota biko na google ma ọ bụ Youtube Nkuzi
FSX ma gị 3 afọ 5 ọnwa gara aga #73
Ọ na-achọ mma ebe 117 na 123. Ma na-adịghị n'ebe. Na scenery.cfg, akpatre mma ebe bụ 115-Tinye na mma, ọ bụghị n'ebe niile, ma njehie na-abịa. Nke ahụ bụ nanị mma faịlụ na-eme ka nsogbu, dị.
Ọzọkwa, BN-2 Islander maka FSX gbajiri agbaji.
FSX ma gị 3 afọ 5 ọnwa gara aga #95
Mgbe na-agbalị ka jikota kwuru VC na a Thomas Ruth A330, pụta bụ ezigbo njọ. M nwere iji wepụ otu n'ime A330s, ọ e merụsịrị agbaji. Achọghị m ka m na-enye u nke echiche ka jikota na ma, m nwere ike ịhụ ihe ọ bụla n'ụzọ ime ya.
FSX ma gị 3 afọ 5 ọnwa gara aga #97
Dariussssss dere, sị: Mgbe agbalị jikota kwuru VC na a Thomas Ruth A330, pụta bụ ezigbo njọ. M nwere iji wepụ otu n'ime A330s, ọ e merụsịrị agbaji. Achọghị m ka m na-enye u nke echiche ka jikota na ma, m nwere ike ịhụ ihe ọ bụla n'ụzọ ime ya.
ụmụ okorobịa c'mon..you're derailing My eri ebe a
Tech probs bụ ebe a: www.rikoooo.com/board?view=topic&catid=5&id=34 :P
FSX ma gị 3 afọ 5 ọnwa gara aga #99
OK mwute, m ihe ọjọọ.
FSX ma gị 3 afọ 5 ọnwa gara aga #130
Dariussssss dere, sị: OK mwute, m ihe ọjọọ.
Enweghị nchekasị My nwoke, m nwetara ọtụtụ ụgbọ elu i nwere ike asa na wax akpa ọchị
FSX ma gị 3 afọ 4 ọnwa gara aga #177
Hello all, I am a retired USAF crew chief/ I fly mainly MATS aka Military Air transport Service/ C97 is by far my favorite Plane. I also fly Reeve AA flights across Alaska and the Aleutian islands The Lockheed L-I88 Electra Is by far my favorite aircraft in the great far north. I am super fan of Convair the B-36, The B-58 Hustler best looking Bomber ever to fly/ and the Commercial 880/990 beautiful fast airliners. I do fly the Capsim 707&727 awesome add-ons well worth the price. I only have about 80 hours in the sim so far still learning and practicing approaches all the time..
Blue igwe ..
FSX ma gị 3 afọ 4 ọnwa gara aga #183
Akpa oyi FCAIR .... ekele unu maka ọrụ gị mba anyị. My ezinụlọ na-eje ozi 6 ọgbọ ugbu a, na dị nnọọ banyere ọ bụla alaka ụlọ ọrụ ma Coast Nche. Ọ dịghị okwu ike mgbe n'ezie na-egosipụta ekele m unu. M chọrọ ijere ozi ma n'ụzọ dị mwute, ọ bụ nanị Civil Air patrol (nke m ụtọ na m ruo ọgwụgwụ heh).
M wee na-CS 707 na ịhụnanya ya. Malite 'u elu bụ ihe m abụchaghị ma ọkọdọ n'isi lmao ka nwere sere elu na youtube video akpa ọchị na CS C-130 ọzọ akụkọ akpa ọchị
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: FCAIR
Oge ike page: 0.312 sekọnd